လီဗာပူး ကစားသမားတစ်ဦးနဲ့ ပက်သက်ပြီး ဘာကြောင့် စိုးရိမ်ပူပန်မိနေသလဲ ဆိုတာကို ရှင်းပြလိုက်တဲ့ အီရန်ရိုက် - SPORTS MYANMAR
လီဗာပူး ကစားသမားတစ်ဦးနဲ့ ပက်သက်ပြီး ဘာကြောင့် စိုးရိမ်ပူပန်မိနေသလဲ ဆိုတာကို ရှင်းပြလိုက်တဲ့ အီရန်ရိုက်
အီရန်ရိုက်က လီဗာပူး အသင်းဟာ တောင်ပံ ကစားသမား ဇာဒန် ရှကီရီ ပွဲကစားခွင့် အလွန် နည်းပါး နေတဲ့ ကိစ္စဟာ ဒီအချိန်မှာ သူ့ကို ပိုမို အာရုံစိုက်မိ နေစေတဲ့ အကြောင်းရင်း တစ်ခု ဖြစ်နေတယ်လို့ ဆိုသွား ပါတယ်။ အာဆင်နယ် ကြယ်ပွင့်ဟောင်း ဖြစ်သူ အီရန်ရိုက်က ဆွစ်ဇာလန် လက်ရွေးစင် ကွင်းလယ် ကစားသမား ဟာ လီဗာပူး ရဲ့ နည်းပြ ယာဂန်ကလော့ ရဲ့ စိတ်ကြိုက် ကစားသမား ပုံစံ မဟုတ်တော့တဲ့ ပုံစံဖြစ်နေတယ်လို့ စိုးရိမ်စိတ်နဲ့ ပြောသွား ခဲ့ပါတယ်။
ဒီရာသီ လီဗာပူး အသင်း အတွက် အရန်ခုံ ကနေ ထလာကာ ကောင်းမွန်တဲ့ ပေးဆပ်မှုတွေ လုပ်ပေး နိုင်ခဲ့ ပေမယ့်လည်း ရှကီရီ ဟာ လီဗာပူး အသင်းရဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ် ၄ ပွဲမှာ လုံးဝ ကစားခွင့် မရ ခဲ့ပါဘူး။
BBC ရဲ့ Radio5Live သို့ ပြောကြား သွားခဲ့ရာမှာ အီရန်ရိုက်က “ရှကီရီ ဘာတွေ ဖြစ်ခဲ့တာလဲ ? ဘာတွေ ဖြစ်နေတာလဲ ? ခင်ဗျားတို့က သူ့ရဲ့ ခြေစွမ်းကျဆင်း နေတာကြောင့်လို့ ထောက်ပြ ကြပါတယ်။ ဖူဟမ် နဲ့ ပွဲမှာ ယာဂန်ကလော့ဟာ သူ့ထက် ဘယ်သူ့ကို ပိုပြီး ဦးစားပေး ရွေးချယ် ခဲ့သလဲ ? ကလော့ဟာ ရှကီရီ ထက် အခြား ကစားသမား တွေကိုသာ ရွေးချယ်ခဲ့တာကို ကျွန်တော် တွေ့ခဲ့ ရပါတယ်။
ဒီ၇ာသီ အစပိုင်း မှာတုန်းက ရှကီရီ ဟာ အသင်းအတွက် ခြားနားမှုတွေ ပေးစွမ်း ခဲ့တယ် ဆိုတာက ကျွန်တော်တို့ မြင်ခဲ့ ရပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ခြေစွမ်းကျဆင်း သွားတယ်လို့ ပြောနေ ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တေ်ာ့ အတွက် ကတော့ တစ်စုံတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်လို့ ထင်မိ နေပါတယ်။” လို့ ဆိုသွား ပါတယ်။
ယနေ့ ဈေးကွက် အခြေအနေမှာ ဆွစ်ဇာလန် လက်ရွေးစင် လို ကစားသမားမျိုး ကို ပေါင် ၁၃ သန်း ထဲနဲ့ ရခဲ့တာကြောင့် ရှကီရီ ကို လျော့ဈေးနဲ့ လီဗာပူး တို့ ရလိုက်တယ် ဆိုပြီး ရာသီ အစပိုင်းက ချီးကျူး ခဲ့ကြ ပါတယ်။ အသက် ၂၇ နှစ် အရွယ် ကစားသမားဟာ အမေရိကန် မှာ ပြုလုပ် ခဲ့တဲ့ ရာသီကြို ခြေစမ်းပွဲ တစ်ခုမှာ ယူနိုက်တက် ဘက်ကို နောက်ပြန် ကန်ချက်နဲ့ ဂိုးသွင်းယူ ခဲ့ပြီးနောက် လီဗာပူး ပရိတ်သတ်တွေကို ဆွဲဆောင် သွားခဲ့ ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ပြီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာလက ယူနိုက်တက် ကို အန်ဖီးမှာ ၃ – ၁ နဲ့ အနိုင် ရရှိ ခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်မှာ ရှကီရီ ဟာ သရေကျနေတဲ့ အချိန်မှာ အရန်ခုံ ကနေ ကွင်းထဲကို ၀င်လာခဲ့ပြီး အသင်းအတွက် အနိုင်ဂိုး ၂ ဂိုး သွင်းယူ ပေးခဲ့တာကြောင့် ဟီးရိုး ဖြစ်ခဲ့ ပါသေးတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း လက်ရှိ မှာတော့ ရှကီရီ ဟာ ပွဲထွက်ခွင့် အတွက် အဒမ် လယ်လာနာ ၊ ဒီဗို့ အိုရီဂီ တို့ရဲ့ နောက်ကိုတောင် ရောက်သွား ခဲ့ပြီး ကလော့ဟာ ဖူဟမ် နဲ့ ပွဲမှာ အဆိုပါ ကစားသမား ၂ ဦးကို အသုံးပြု ခဲ့ပါတယ်။ ရှကီရီ ဟာ သူ့ရဲ့အသင်းဟောင်း ဘိုင်ယန်မြူးနစ် အသင်းနဲ့ ပြန်လည် တွေ့ဆုံ ခဲ့တဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် ၁၆ သင်း ရှုံးထွက် အဆင့် နှစ်ကျော့ စလုံးကို လွဲချော် ခဲ့ပြီး လီဗာပူး အတွက် နောက်ဆုံး ကစား ပေးခဲ့တဲ့ ပွဲကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ လကုန်ပိုင်းက ယူနိုက်တက် နဲ့ ၀ – ၀ သရေ ကျခဲ့တဲ့ ပွဲပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကလော့ဟာ အဆိုပါ ပွဲမှာလည်း ရှကီရီ ကို ၁၈ မိနစ်သာ ကစားခွင့် ပေးခဲ့ပြီး ဇန်န၀ါရီ အစောပိုင်း ကတည်းက စကာ စတုတ်စီးတီး ကစားသမားဟောင်းဟာ လီဗာပူး အတွက် ပွဲချိန်ပြည့် ကစားခွင့် မရ ခဲ့ပါဘူး။
လီဗာပူး ကစားသမားတဈဦးနဲ့ ပကျသကျပွီး ဘာကွောငျ့ စိုးရိမျပူပနျမိနသေလဲ ဆိုတာကို ရှငျးပွလိုကျတဲ့ အီရနျရိုကျ
အီရနျရိုကျက လီဗာပူး အသငျးဟာ တောငျပံ ကစားသမား ဇာဒနျ ရှကီရီ ပှဲကစားခှငျ့ အလှနျ နညျးပါး နတေဲ့ ကိစ်စဟာ ဒီအခြိနျမှာ သူ့ကို ပိုမို အာရုံစိုကျမိ နစေတေဲ့ အကွောငျးရငျး တဈခု ဖွဈနတေယျလို့ ဆိုသှား ပါတယျ။ အာဆငျနယျ ကွယျပှငျ့ဟောငျး ဖွဈသူ အီရနျရိုကျက ဆှဈဇာလနျ လကျရှေးစငျ ကှငျးလယျ ကစားသမား ဟာ လီဗာပူး ရဲ့ နညျးပွ ယာဂနျကလော့ ရဲ့ စိတျကွိုကျ ကစားသမား ပုံစံ မဟုတျတော့တဲ့ ပုံစံဖွဈနတေယျလို့ စိုးရိမျစိတျနဲ့ ပွောသှား ခဲ့ပါတယျ။
ဒီရာသီ လီဗာပူး အသငျး အတှကျ အရနျခုံ ကနေ ထလာကာ ကောငျးမှနျတဲ့ ပေးဆပျမှုတှေ လုပျပေး နိုငျခဲ့ ပမေယျ့လညျး ရှကီရီ ဟာ လီဗာပူး အသငျးရဲ့ ပွီးခဲ့တဲ့ ပှဲစဉျ ၄ ပှဲမှာ လုံးဝ ကစားခှငျ့ မရ ခဲ့ပါဘူး။
BBC ရဲ့ Radio5Live သို့ ပွောကွား သှားခဲ့ရာမှာ အီရနျရိုကျက “ရှကီရီ ဘာတှေ ဖွဈခဲ့တာလဲ ? ဘာတှေ ဖွဈနတောလဲ ? ခငျဗြားတို့က သူ့ရဲ့ ခွစှေမျးကဆြငျး နတောကွောငျ့လို့ ထောကျပွ ကွပါတယျ။ ဖူဟမျ နဲ့ ပှဲမှာ ယာဂနျကလော့ဟာ သူ့ထကျ ဘယျသူ့ကို ပိုပွီး ဦးစားပေး ရှေးခယျြ ခဲ့သလဲ ? ကလော့ဟာ ရှကီရီ ထကျ အခွား ကစားသမား တှကေိုသာ ရှေးခယျြခဲ့တာကို ကြှနျတျော တှခေဲ့ ရပါတယျ။
ဒီရာသီ အစပိုငျး မှာတုနျးက ရှကီရီ ဟာ အသငျးအတှကျ ခွားနားမှုတှေ ပေးစှမျး ခဲ့တယျ ဆိုတာက ကြှနျတျောတို့ မွငျခဲ့ ရပါတယျ။ သူ့ရဲ့ ခွစှေမျးကဆြငျး သှားတယျလို့ ပွောနေ ကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကြှနျတျော့ အတှကျ ကတော့ တဈစုံတဈခု ဖွဈခဲ့တာကွောငျ့လို့ ထငျမိ နပေါတယျ။” လို့ ဆိုသှား ပါတယျ။
ယနေ့ စြေးကှကျ အခွအေနမှော ဆှဈဇာလနျ လကျရှေးစငျ လို ကစားသမားမြိုး ကို ပေါငျ ၁၃ သနျး ထဲနဲ့ ရခဲ့တာကွောငျ့ ရှကီရီ ကို လြော့စြေးနဲ့ လီဗာပူး တို့ ရလိုကျတယျ ဆိုပွီး ရာသီ အစပိုငျးက ခြီးကြူး ခဲ့ကွ ပါတယျ။ အသကျ ၂၇ နှဈ အရှယျ ကစားသမားဟာ အမရေိကနျ မှာ ပွုလုပျ ခဲ့တဲ့ ရာသီကွို ခွစေမျးပှဲ တဈခုမှာ ယူနိုကျတကျ ဘကျကို နောကျပွနျ ကနျခကျြနဲ့ ဂိုးသှငျးယူ ခဲ့ပွီးနောကျ လီဗာပူး ပရိတျသတျတှကေို ဆှဲဆောငျ သှားခဲ့ ပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ ပွီးခဲ့တဲ့ ဒီဇငျဘာလက ယူနိုကျတကျ ကို အနျဖီးမှာ ၃ – ၁ နဲ့ အနိုငျ ရရှိ ခဲ့တဲ့ ပှဲစဉျမှာ ရှကီရီ ဟာ သရကေနြတေဲ့ အခြိနျမှာ အရနျခုံ ကနေ ကှငျးထဲကို ၀ငျလာခဲ့ပွီး အသငျးအတှကျ အနိုငျဂိုး ၂ ဂိုး သှငျးယူ ပေးခဲ့တာကွောငျ့ ဟီးရိုး ဖွဈခဲ့ ပါသေးတယျ။
ဒါပမေယျ့လညျး လကျရှိ မှာတော့ ရှကီရီ ဟာ ပှဲထှကျခှငျ့ အတှကျ အဒမျ လယျလာနာ ၊ ဒီဗို့ အိုရီဂီ တို့ရဲ့ နောကျကိုတောငျ ရောကျသှား ခဲ့ပွီး ကလော့ဟာ ဖူဟမျ နဲ့ ပှဲမှာ အဆိုပါ ကစားသမား ၂ ဦးကို အသုံးပွု ခဲ့ပါတယျ။ ရှကီရီ ဟာ သူ့ရဲ့အသငျးဟောငျး ဘိုငျယနျမွူးနဈ အသငျးနဲ့ ပွနျလညျ တှဆေုံ့ ခဲ့တဲ့ ပွီးခဲ့တဲ့ ခနျြပီယံလိဂျ ၁၆ သငျး ရှုံးထှကျ အဆငျ့ နှဈကြော့ စလုံးကို လှဲခြျော ခဲ့ပွီး လီဗာပူး အတှကျ နောကျဆုံး ကစား ပေးခဲ့တဲ့ ပှဲကတော့ ပွီးခဲ့တဲ့ လကုနျပိုငျးက ယူနိုကျတကျ နဲ့ ၀ – ၀ သရေ ကခြဲ့တဲ့ ပှဲပဲ ဖွဈပါတယျ။ ကလော့ဟာ အဆိုပါ ပှဲမှာလညျး ရှကီရီ ကို ၁၈ မိနဈသာ ကစားခှငျ့ ပေးခဲ့ပွီး ဇနျနဝါရီ အစောပိုငျး ကတညျးက စကာ စတုတျစီးတီး ကစားသမားဟောငျးဟာ လီဗာပူး အတှကျ ပှဲခြိနျပွညျ့ ကစားခှငျ့ မရ ခဲ့ပါဘူး။